Wararka - Dheelitir la'aanta sahayda iyo baahida! Qiimaha mustaqbalka macdanta birtu waxay gaadhay heer aad u sarreeya
Maanta, mustaqbal aan madhanayn, oo madow ayaa kor u kacay guddiga oo dhan, dib -u -soo -celinta ganacsiga ugu weyn, ayaa soo sheegay 6012 yuan halkii ton. Sida alaab ceeriin oo bir ah, mustaqbalka macdanta birta qiimaha qandaraaska ugu weyn ayaa sidoo kale ah ganacsi, oo dhigay rikoor sare.
Maanta, ka hor furitaanka suuqa mustaqbalka gudaha, heshiiska ugu weyn ee mustaqbalka tusaha macdanta birta ee Singapore ayaa hal mar kor u kacay xadka, iyo qiimihii intraday markii uu gaaray 226.55 doolarka Mareykanka / tan, oo ah rikoor aad u sarreeya. Macdanta birta ee caalamiga ah 62% Tirakoobka Proctor wuxuu sare u kacay 29% wuxuuna gaaray 212.75 doolarka Mareykanka halkii ton halkii May 74 laga bilaabo 164.50 doolarka Mareykanka halkii ton sanadkii hore. Iyada oo ah kheyraad caalami ah, macdanta birta ayaa si buuxda ugu xiran gudaha iyo dibaddaba. Kor u kaca qiimaha Proctor ayaa ku fiday suuqa gudaha, taasoo ka dhigaysa qiimaha dekadda gudaha (61% budada jinbuba ee dekedda Qingdao, isla tan hoose) iyo qiimaha mustaqbalka. Bishii Maajo 7, qiimaha barta dekadda gudaha iyo qiimaha mustaqbalka macdanta birtu waxay ahaayeen 1399 yuan / T (oo loo beddelay qiimaha caadiga ah ee mustaqbalka ee gudaha 1562.54 yuan / T) iyo 1205.5 yuan / T siday u kala horreeyaan, Marka la barbar dhigo bilowgii sannadka, waxay kordhay 32 % iyo 21% siday u kala horreeyaan.
Sababtoo ah mustaqbalka macdanta birta ayaa mishiinnada birta ee waddanku leeyihiin awood ay kaga gaashaaman karaan kororka alaabta ceeriin ah. Khubarada qaar ayaa sheegay in laga soo bilaabo hawlgalkii dhabta ahaa ee suuqa sannadkii hore, iyada oo hoos loo eegayo sicirka macdanta oo kor u kacay iyo qiimaynta caalamiga ah ee ku salaysan sicirka badeecadaha dibedda, iyada oo la tixraacayo sicir-dhimista muddada-dheer ah ee qiimayaasha mustaqbalka iyo bar-tilmaameedka, iyadoo la adeegsanayo mustaqbalka si loo ilaaliyo khataraha noqo hab wax ku ool ah oo lagu hagaajiyo habka qiimaynta birta iyo ilaalinta danaha warshadaha birta iyo birta.
Si kastaba ha ahaatee, macdanta birtu ma aha tan kaliya ceeriin ee birta iyo birta, xoqiddu sidoo kale waa mid ka mid ah alaabta ceeriin ee muhiimka ah. Waqtigan xaadirka ah, mustaqbalka birta iyo biraha gudaha ayaa weli u baahan in la sii wanaajiyo. Horaa loo yidhi, “haddaad doonayso inaad shaqo fiican qabato, waa inaad marka hore qalabeysaa qalabka”. Suuqa mustaqbalka waa inuu si joogto ah u hagaajiyaa dhismaha nidaamka kala duwan ee mustaqbalka, si loogu adeego shirkadaha hay'adaha.